रहेनन् पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, को हुन् तुलसी गिरी ? - Sabal Post
रहेनन् पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी, को हुन् तुलसी गिरी ?
३ पुस, काठमाडौ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष डा‍‍। तुलसी गिरीको निधन भएको छ। मंगलबार बिहान बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा ९३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको पारिवारले जनाएको छ। कलेजोको क्यान्सरका बिरामी उनी दुई दिनअघि मात्रै मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्जु भएका थिए। उनका श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन्। स्व। गिरीकी श्रीमती शाहरा योञ्जन प्राध्यापन र सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध छिन्।
को हुन् तुलसी गिरी ?
डाक्टर तुल्सी गिरी राजाले शासन सत्ता हातमा लिएका बखत पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाइएका व्यक्ति हुन्। २०१७ सालमा राजाले जन निर्वाचित संसद र सरकारलाई भङ्ग गरी पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि यिनी फर्स्ट मिनिस्टर हुँदै मन्त्रीपरिषदको उपाध्यक्ष बनाइएका थिए। पछि यिनी प्रधानमन्त्री पनि बनाइए।
यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा देशको शासन सत्ता हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेपछि यिनी पुनः मन्त्रीपरिषदको उपाध्यक्ष बनाइए। उनी नेपालमा ूपन्चायत ब्यबस्थाको जननीू मनिन्छन् । सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने ब्यक्ति पनि हुन् । उनी लामो समयदेखि बिदेशमा बस्दै आएका थिए । नेपालमा माघ १९ गतेको राजनीतिक घटना पछि नेपाल आएका हुन् ।
राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार तुम्बापाेकाे निधन